Ra’iisul Wasaare ku xigeenka iyo xubno kale ayaa maanta ka qayb galay 53 guuradii kaso wareegtay Xoriyadda dalka Burundi..SAWIRRO – Radio Muqdisho
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka iyo xubno kale ayaa maanta ka qayb galay 53 guuradii kaso wareegtay Xoriyadda dalka Burundi..SAWIRRO
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Xukuumadda F. Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carte iyo xubno ka tirsan golaha Wasiiradda oo ay ka mid yihiin Wasiirka Gaashaandhigga Gen. C/qaadir Sheekh Cali Diini, Wasiiru dowlaha Wasaaradda Arrimaha Dibedda Khaalid Cumar Cali iyo Taliyaha Ciidamadda Xoogga dalka Soomaaliyeed S/G Daahir Aaden Cilmi, ayaa maanta magaalada Muqdisho uga qayb galay munaasabad lagu xusayay 53-guuradii kasoo wareegtay markii ay xoriyadda qaateen dalka Burundi, taasi oo soo qaban qaabisay safaaradda Burundi ee magaalada Muqdisho.
Safiirka dowladda Burundi u fadhiya Soomaaliya Joseph Nkurunziza, ayaa ku dheeraaday halgankii dheeraa ee bulshada reer Burundi usoo galeen xoriyaddooda, isagoona xusay in ay ka go’antahay taageerada iyo dadaalka nabadeyna Soomaaliya ay ka wadaan.
“Shacabka Burundi waxey fahamsanyihiin muhiimadda ah in wallaal loo gurmado marka uu gurmad u baahanyahay, waana sababta ay ciidamadeenu u joogaan Somalia si ay nabada u soo celiyaan. Somalia waxey istaahishaa nabad iyo xasilooni in dadkeedu helaan. Waxaan sii wadi doonaan dhiigga ay wilasheena reer Burundi u hurayaan dalkooda labaad ee Soomaaliya” ayuu yiri Safiirka Burundi ee Soomaaliya.
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya, Gen. C/qaadir Sheekh Cali Diini, ayaa hambalyo u diray shacabka iyo madaxda Burundi, isagoo dhianaca kale uga tacsiyeeyey askartii uga dhimatay weerarkii ay kooxda Al-shabaab ku qaadeen deegaanka Leego ee gobolka Shabellaha Hoose.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carte ayaa hambalyo u diray guud ahaan dadka reer Burundi, wuxuna sheegay dowladda Burundi iyo shacabkeeduba in Soomaaliya ay usoo gurmadeen waqti adag oo taageero iyo isgarab tag ay u baahnaayeen.
“Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay taageerada Burundi ee dhanka amniga. Ciidanka Burundi waxey safka hore uga jiraan howlgalada kooxaha nabad-diidka dalka looga sifeynayo, iyagoo qeyb ka ah AMISOM. Ciidankeennu iyagoo kaashanaya AMISOM waxey habeen iyo malinba u taagan yihiin sidii cadowga looga sifayn lahaa goobaha ay dalka uga harsan yihiin, bacdamaa ay khatar ku yihiin Soomaaliya iyo caalamka oo dhan. Burundi waxaan kala shaqeyn doonaa sidii xiriirka labada dal u sii xoojin laheyn.” Ayuu yiri R/Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carte ayaa dhanka kale sheegay in dowladda Burundi ay Soomaaliya u soo gurmatay xili aad u adag, shacabka Soomaaliyeedna aysan marnaba illaawi doonin sida ay dhiigooda ugu hureen si Soomaaliya ay nabad u noqoto.
Olole nadaafadeed oo laga sameeyay gudaha wasaaradda warfaafinta-Sawirro
Hey’adda Bisha Cas ee Iiran oo deeq gaarsiisay dad tabaaleysan-Sawirro